Ukutshaya kakubi kangakanani emzimbeni nasengqondweni yakho
Ukutshaya kuwonakalisa njani umzimba wakho
Ukutshaya imidiza kuyayonakalisa impilo yakho. Akukho ndlela ikhuselekileyo yokutshaya imidiza. Ukutshintsha icuba lakho usebenzisa i-stogie, ipayipi, okanye i-shisha ayizukukunceda ukuphepha iingozi zempilo.
Iicigarettes ziqulathe izinto ezimalunga nama-600, uninzi lwazo olunokufumaneka nakwiilayita nakwihookahs. Xa ezi zinto zitshisa, zivelisa ngaphezulu kwe-7, 000 yemichiza, egxile kuMbutho weMiphunga waseMelika. Uninzi lweekhemikhali luyingozi ngaphandle kwe-69 kwezi zinxulunyaniswa nomhlaza.
E-United Yithi, izinga lokufa kwabantu abatshayayo liphindwe kathathu kunabantu abangazange batshaye icuba. Ngokwenyani, amaZiko okuLawula nokuKhuselwa kwezifo (i-CDC) athi ukutshaya yenye yezona zinto zixhaphakileyo "kwesizathu sokufa" eU.SA. Kuba iimpembelelo zokutshaya zisenokungabikho kwangoko, iingxaki kunye nokwenzakala kunokuhlala ixesha elide. Into elungileyo kukuba ukuyeka ukutshaya kunokuguqula iziphumo ezininzi.
Esinye sezinto ezikwisigarethi sisiyobisi esiguqula imo ebizwa ngokuba yi-nicotine emsulwa. Inicotine yokwenene ifikelela kwingqondo yakho kwimizuzwana nje kwaye ikwenza uzive ubaluleke ngakumbi okwexeshana. Kodwa njengoko eso siphumo siphela, udiniwe kwaye unqwenela ngakumbi. Inicotine yokwenyani iyinto eyakha kakhulu, yiyo loo nto abantu bekufumanisa kunzima ukuyeka ukutshaya.
Ukurhoxa ngokwasemzimbeni kwi-nicotine yokwenyani kungonakalisa ukusebenza kwakho kwengqondo kwaye kubangele ukuba uzive uxhalabile, ucaphukile kwaye uxinezelekile. Ukungathandeki kunokubangela iintloko kunye nokuphumla.
Xa uphefumla umsi, usebenzisa iikhemikhali ezinokulimaza indawo yakho yemiphunga. Ekugqibeleni, lo monakalo ubangela iingxaki ezininzi. Kunye nosulelo olongezelelekileyo, abantu abatshayayo icuba bakwimeko ephezulu yeemeko ezingapheliyo ezingapheliyo ezibangelwa yimiphunga ezinje:
emphysema, ukwenzakala kweengxowa zomoya kwindawo yakho yemiphunga
i-bronchitis eqhubekayo, ukuqunjelwa kwexesha elide okuchaphazela i-liner ye-inhaling kunye ne-exhaling tubes yemiphunga
isifo esinganyangekiyo semiphunga (COPD), izifo ezininzi zemiphunga
Ukungancedi kweemveliso zecuba kunokubangela ukuxinana kwangoko kunye nenkqubo yokuphefumla ngaphandle kokuba indawo yakho yemiphunga kunye neendlela zomoya ziqalise ukulungisa. Ukuphuculwa kwendalo emva kokuyeka ukutshaya luphawu oluqinisekileyo lokuba ukuphefumla kwakho kuyachacha.
Abantwana abanabazali abatshayayo imidiza basesichengeni sokukhwehlela, ukuvutha, kunye neziqephu zesifuba kunabantwana abangenabazali. Ukongeza, ngokubanzi banamazinga aphezulu enyumoniya kunye ne-bronchitis.
Ukutshaya imidiza kuyayonakalisa yonke inkqubo yentliziyo. Ukutshaya kubangela ukuba iinqanawa zokuhamba kwegazi ziqine, nto leyo ethintela ukujikeleza kwegazi. Njengoko ixesha lihamba, ukunciphisa okuqhubekayo, kunye nomonakalo kwiinqanawa zegazi, kunokubangela isifo se-peripheral isifo.
Ukutshaya icuba kukonyusa uxinzelelo lwegazi, buthathaka ukuhamba kwegazi kwindawo yolwakhiwo lwenqanawa, kunye nokunyusa amahlwili egazi. Ngomnye nomnye, oku kwandisa umngcipheko wokubetha kwentliziyo.
Usemngciphekweni ophucukileyo wokuhla ekuthambekeni kweengxaki zeziko ukuba ukhe wafumana utyando olusecaleni kweziko, ugwayimbo oluphakathi, okanye istent esikwinqanawa yegazi.
Ukutshaya icuba akuchaphazeli nje impilo yentliziyo yakho, kodwa ikwimo yezempilo yabo bakungqongileyo abangatshayiyo. Ukupapashwa kwabo batshayayo banomngcipheko ofanayo kumntu ongatshayiyo kuba umntu oza kutshaya icuba. Iingozi zibandakanya ukubetha kwentliziyo kwiziko, ukubetha kwamaziko, kunye nesifo sendawo.
Inkqubo ye-Integumentary (ulusu, iinwele ezinqabileyo kunye nezipikili)
Iimpawu ezibonakalayo zokutshaya zibandakanya isikhumba kunye notshintsho kulusu. Izinto ezikwimidiza ziguqula ulusu lwakho. Uphando lwangoku lubonisa ukuba ukutshaya icuba kuphakamisa umngcipheko we-squamous cell carcinoma (umhlaza wolusu).
Iinzipho zakho kunye neenzwane azikhuseli kwiziphumo zokutshaya. Ukutshaya kuphakamisa amathuba osulelo lwefungal.
Iinwele ezigwenxa nazo zichaphazeleka yi-nicotine yokwenyani. Isifundo esidala sifumanise ukuba yonyusa ilahleko yokutshixa okutshiweyo, ibalding kunye nokwenza ngwevu.
Ukutshaya icuba kukonyusa umngcipheko womlomo, umqala, ingqula kunye nomhlaza womqala. Abatshayayo banamazinga aphezulu omhlaza wepancreatic. Nabo "batshayayo kodwa bangaphefumli" bajongene nomngcipheko omkhulu wokuba nomlomo.
Ukutshaya kukwabonelela ngefuthe kwi-insulin, eyenza ukuba kube lula ngakumbi ukuba ube nokukhula kwe-insulin. Oko kukubeka emngciphekweni wohlobo lweswekile yesi-2 kunye neengxaki, ezinokuthi ziphuhle ngokukhawuleza kunokuba kunabo bangatshayiyo.
Isini kunye nenkqubo yokuzala
Inicotine yokwenene ichaphazela ukuhamba kwegazi ukuya kwiindawo zangasese zamabhinqa kunye namadoda. Yenzelwe amadoda, oku kunokunciphisa ukusebenza ngokwesondo. Ukufumana abantu basetyhini, oku kunokubangela ukungoneliseki kwiintlobano zesini ngokumane kunciphise ukwehla kwembambano kunye nokukwazi ukufikelela kuvuthondaba. Ukutshaya kunokunciphisa amanqanaba esini esini kumadoda nakwabasetyhini. Oku kunokubangela ukunciphisa umdla wesondo.
Ukuthintela ukutshaya kunzima, nangona kunjalo, ugqirha wakho unokukunceda wenze umbono. Isicelo kubo iingcebiso. Kukho iindidi zeziyobisi ezingabhaliswanga kunye nonyango ezixhasa ukuyeka. Ungatshintsha kwakhona kuphando lwethu lokuyeka ukutshaya, ekuhlala kukho iingcebiso, iingxelo ezivela kwabanye, kunye nokunye. Uya kufumana izibonelelo ezimfutshane nezide zokuyeka ukutshaya. Kuba ukutshaya icuba kuchaphazela inkqubo yabantu abaninzi, ukufumana isicwangciso sokuyeka lelona nqanaba liphambili onokucinga ngalo ngokuphila ubomi obolulekileyo kwaye obutofotofo.
Ngaba ucinga ukuba oku kukhangeleka kupholile?